Fahad Yaasiin oo dalacsiiyay Sarkaalkii ka furdaamiyay xanibaadii Jabuuti – Soomaali 24 Media Network
Posted on September 24, 2021 Leave a Comment on Fahad Yaasiin oo dalacsiiyay Sarkaalkii ka furdaamiyay xanibaadii Jabuuti
Mid kamid ahaa saraakiishii ugu dhawaa Farmaajo iyo Fahad, sidoo kale ku caan ah laba bogleyn iyo inuu galaan gallo badan leeyahay ayaa la dallacsiiyay xilli ay xaaladdu adag tahay.
Xarunta nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya iyo jagada ugu sareeya waxay muddo bil ku dhaw yihiin magacyada loogu hadal heynta badan yahay Soomaaliya.
Tan iyo soolaabashii Fahad Yaasiin, isha waxaa lagu hayaa wada hadalada socda ee qeybta ugu weyn looga arinsanayo taliska NISA oo laba taliye kumeel gaar ah u magacaaban.
Shir habeen kahor xarunta nabad sugidda ee Habar Qadiijo ku dhex maray Fahad Yaasiin iyo Saraakiisha sare ee NISA ayaa laga bixiyay xogo dheeraad ah oo ku saabsan waxyaabaha looga hadlay iyo khubadii uu Fahad Jeediyay.
Dadkii ku sugnaa shirkaasi waxay isla qireen in iyadoo taleefanada la iska wada xareeyay uu Fahad sheegay in ay jiraan saraakiil nabad sugid ah oo si hoose loo xaliyay danbiyo ay galeen, lagana baajiyay maxkamadeyn, si buu yiri loo ilaaliyo sharafka hey’adda.
Ilo wareedyada shirkaasi ka qeybgalay gaar ahaan sirdoonka, waxay shaaciyeen in si gaar ah uu Fahad Yaasiin u dalacsiiyay taliyiha dabagalka Korneel Cabdullahi Dheere oo xilkii hore loogu daray madaxa Mukhaabaraadka Soomaaliya.
Faah faahin laga bixiyay xilkaasi madaxa mukhaabaraadka ayaa lagu yiri, waa jagada ugu sareysa ee sirdoonka qaabilsan xogaha sirdoon ee dibadda, xuduudaha iyo waxyaabaha gudaha dalka soo gala.
Fahad Yaasiin ayaa laga soo xigtay inuu yiri, Cabdullahi Dheere waa nin adag, waana ninka aan dartiis uga tanaasulay xilkii NISA, iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in sarkaalkan uu yahay taliyaha qarsoon ee hey’adda, waxaana suurto gal ah sidoo kale in Farmaajo iyo Rooble isku raacaan magacaabistiisa.
Cabdullahi Daahir oo Cabdullahi Dheere ku caan ah ayaa dadka sida dhaw u yaqaana waxay sheegeen in loo heysto danbiyo dhowr ah oo ah kamid yihiin duqeymo uu amray oo lagu dilay dad shacab ah, beegsiga dad siyaasadda saameyn ku leh iyo eedo ku saabsan xiriir uu la leeyahay xubno kamid ah Shabaab.
Sidoo kale Sarkaalkan la soo sheegay in hadda lagu abaal mariyay madaxa mukhaabaraadka Soomaaliya ayaa jimcihii hore waxaa la sheegay inuu kaalinta ugu weyn ka qaatay sidii Fahad Yaasiin looga furdaamiyay xayiraadii Jabuuti.
Fahad iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa wararku sheegayaan in ay aad ula dhacsan yihiin shaqooyinka uu qabtay Cabdullahi Dheere inkasta oo dad badan ku eedeeyaan danbiyo ciqaab mudan, waxaana muuqata in markale ay awoodeysanayaan isbaheysiga nabad sugidda ee sanadihii u danbeeyay.
← Xog: Qaabkee Fahad Yaasiin looga furdaamiyay xanibaadii Jabuuti?
Xog: Shaxda Villa Somalia u adeegsatay doorashada Aqalka Sare ee Somaliland iyo saraakiil la heshiisiiyay →